मैले भोगेको त्यो समय- विविधा - कान्तिपुर समाचार
हामीले भोगेको र बेहोरेको त्यो समय र हाम्रा छोराछोरी, नातिनातिनी हुर्कंदाको यो समयमा व्यवहारमै आएका परिवर्तन देखेर अहिले अचम्म लाग्छ । कत्रो परिवर्तन ८/९ दशकमा ?
भाद्र ९, २०७५ भैरव रिसाल
काठमाडौँ — रोग झाडाबान्ता उपचार आर्यघाट !मेरी आमालाई झाडाबान्ता लागेछ । उहाँलाई अस्पताल होइन, पशुपति आर्यघाट लगिएछ । त्यसरी अस्पताल नलगी आर्यघाट लैजाने निर्णय मेरा बाको सहमतिमा भएछ । बाको सहमति लिने कठोर त्यो निर्णयमा गाउँका बाभन्दा जेठाबाठा जान्ने–सुन्ने बाले पनि मान्ने बुजु्रकहरूको परामर्श प्रमुख कारण हो ।
मेरी आमालाई झाडाबान्ता लागेछ । उहाँलाई अस्पताल होइन, पशुपति आर्यघाट लगिएछ । त्यसरी अस्पताल नलगी आर्यघाट लैजाने निर्णय मेरा बाको सहमतिमा भएछ । बाको सहमति लिने कठोर त्यो निर्णयमा गाउँका बाभन्दा जेठाबाठा जान्ने–सुन्ने बाले पनि मान्ने बुजु्रकहरूको परामर्श प्रमुख कारण हो । यो कुरो हो आजभन्दा ८७ वर्ष अघिको या १९८७ असारको । मेरी आमा त्यहीं आर्यघाटमा बित्नु भएछ । म टुहुरो भएँ, ३ वर्षको उमेरमै ।
बा विधुर हुनुभो, ४४ वर्षको उमेरमा । मेरो एउटा भाइ थियो रे एक वर्षको । ऊ पनि बितेछ, म थाहा पाउन्न । त्यो युगमा झाडापखालाका बिरामीलाई पानीको थोपो पनि खान नदिने चलन रहेछ । पानी खान दियो भने त्यो पानीले झन् बढी दिसा र बमन हुन्छ भन्ने मान्यता रहेछ । कहाँको झाडाबान्ता–दिसा बमन, कहाँ पानीको थोपो पनि खान नदिने । बिरामीले आफ्नै बलमा पानी खाला भनी पानीका भाँडा लुकाइदिने गर्थे रे । त्यतिबेलाको काठमाडौं खाल्डोको गुन्डु तिथलीको स्वास्थ्य स्थितिको शब्द चित्र हो, यो ।
त्यतिबेला मेरी आमालाई आर्यघाट नलगी अस्पताल लगेको भए उहाँ बाँच्नुहुन्थ्यो, पक्कै । । म टुहुरो हुने थिइन, मेरो वा विधुर हुनु पर्दैनथ्यो । सायद मेरो भाइ पनि अकालमै मर्दैनथ्यो । मेरी आमा पनि २५ वर्षकै कलिलो उमेरमा मर्नु हुन्नथ्यो । अहिले म भन्ने गर्छु, झाडाबान्ता वा हैजा लाग्दा अस्पताल होइन, पशुपति आर्यघाट लगेर बिरामीलाई कालको मुखमा हाल्ने जमानामा जन्मिएको हुँ म । बिरामीलाई उपचार गरेर बचाउने कुरातर्फ होइन, मरेपछि स्वर्ग पठाउन आर्यघाट लगिँदो रहेछ, म हुर्कने बढ्ने समयताका । मेरी आमासँग बिहे गर्नु अघि पनि बाको बिहे भएको रहेछ । उहाँ पनि माइती फर्पिङ पर रामचे भन्ने ठाउँ माइतीमै झाडाबान्ताले बित्नुभएको रे । त्यो बेला न विश्व स्वास्थ्य संगठन थियो, नत थियो, जीवनजल वा नुन–चिनी–पानी खुवाउने चेतना नै ।
अघिल्लो युगको शौचालयको कथा
स्वस्थ शौचालय त के शौचालनको अवधारणासमेत थिएन । पानीको खाँचो टार्न ठाउँ–ठाउँमा ढुङ्गेधारा हुन्थे भने गुजमुज्ज बस्ती भएका ठाउँ जहाँ ढुङ्गेधारा हुँदैनथे, त्यस्ता ठाउँमा गहिरा इनार खनिएका हुन्थे । महाराजगन्ज, भाटभटेनी, डिल्लीबजार, सिंहदरबार आदि ठाउँमा त कुलो नै पानीको मुख्य स्रोत हुन्थ्यो । त्यो कुलोको पानीले घट्ट चल्थ्यो, जहाँ गहुँ, मकै, कोदो कुटिन्थ्यो, तोरी पेलिन्थ्यो । मास जस्ता दाल जातिका वस्तु घर–घरमा जाँतोमा पिँधिन्थ्यो । सहरका मुख्य–मुख्य ठाउँमा सार्वजनिक पाइखाना हुन्थे ।
जहाँको दिसा एकथरीले चार पाथी जाने टिनमा नोलले बेकेर काठमाडौंकै तरकारी–काउली, रायोको साग, प्युठाने मुला, गान्टेमुला आदिमा हाल्थे । सो मलमूत्र हालेको तरकारी स्तरीय र स्वादिला हुन्थे । काठमाडौंका केही हुनेखानेहरूको भने आफ्नै बगंैचा वा करेसाबारीको खास–खास ठाउँमा चर्पी हुन्थ्यो, जहाँ टिन राखिएको हुन्थ्यो । मान्छेहरू त्यही टिनमा दिसा गर्थे । टिन भरिन लागेपछि त्यो लगेर माथि भनेझैं किसानको तरकारी बालीमा मलको रूपमा प्रयोग गराउँथे ।
मलमूत्र लैजानेले घरबेटीबाट प्रत्येकपल्ट १ रुपैयाँ र तरकारी किसानले प्रतिटिन १ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्थे । त्यस्तो मलले तरकारी यस्तो सप्रन्थ्यो कि एउटा रायोको डुकुले ८/१० जनालाई तरकारी पुग्थ्यो । त्यसो त त्यो जमानामा तरकारी कम खाने गरिन्थ्यो । प्युठाने मुला पनि पिडौँलाजत्रा यामानका हुन्थे । काउली पनि डेड, दुई, अढाई धार्नीसम्मका पनि हुन्थे । तर होशियारीसँग केलाइएन भने मानव विष्टा पेटमा पर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । खोला किनारतिर घर हुने वा डेरा गरी बस्नेहरू टुकुचा, धोबीखोला, विष्णुमती किनारतिर मलमूत्र विसर्जन गर्थे, खुला शौचालय । कतै–कतै त सुँगुर पालिएका हुन्थे ।
मान्छेले दिसा गर्दागर्दै सुँगुर दिसा खान हुँ गरेर आउने । यो हो, शौचालयको विगत ।
जङ्गबहादुरले ३० वर्ष राज्य गर्दा पनि काठमाडौंमा खानेपानीका धारा–कलधारा राख्न सकेनन् वा मन गरेनन् वा त्यो अवधारणा नै आएन । त्यसपछि बमबहादुर र रणोद्दिपसिंहको पालामा पनि कलधाराको धारणा आएन । वीरशमशेर श्री ३ महाराज भएपछि उनको ध्यान कलधारा स्थापनातर्फ गयो र वीरधारा नाममा धारा राखियो । जबकि त्यस्ता धारामा २४ सै घन्टा पानी आउँथ्यो । टोल–टोलका ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक धारामात्र जडान गरिएका थिए । निजी धारा राजपरिवार बाहेक नगण्य पहुँचवाला व्यक्तिले मात्र पाएका थिए । वीरशमशेरको १५ वर्षे राज्यकालमा वीर अस्पताल पनि बन्यो । तर वीरशमशेरको पालामा पनि स्वस्थ शौचालयको अवधारणा आएन ।
सुखा शौचालय आजको चुनौती
सुलभ शौचालय पद्धति छ, अर्को । जम्मा १ लिटर पानीले फ्लस हुन्छ । प्यानमा वाटर सिल (पानीको ताल्चा) हुन्छ, जसको कारण दुर्गन्ध आउँदैन । यो सुलभ शौचालय अभियान इष्ट कन्सल्ट संस्थाको नाफारहित कार्यक्रम हो । यो काममा मैले आफ्नै गाउँ दधिकोटका अतिरिक्त मध्यपुर थिमी, लुभु, कीर्तिपुरमा चलाएँ । जसको नेतृत्व उक्त कन्सल्टका पीसी जोशीले गर्थे । यसका बाछिटा इलामको जस्वीरे, धादिङको नीलकण्ठ गाउँसम्म पनि पुर्‍याइयो ।
यो शौचालय सस्तो भइकन पनि गन्ध नआउने र किटाणुरहित हुने विशेषता हुन् । पौल पानी नभएको आजको तातो बढ्ने युगमा किटाणु र गन्धरहित सुरक्षा शौचालय पद्धतिको आविष्कार गर्नु युगको माग हो । विज्ञ, विशेषज्ञहरूका लागि यो एउटा हाँक पनि हो । म भन्ने गर्छु– ‘लभ’ गर्नु अघि त्यो केटोको घरमा सुरक्षित शौचालय छ/छैन, त्यो बुझ्ने, यदि छैन भने ‘लभ’ नै फिर्ता गर्ने परामर्श दिने गर्छु ।
म केटाकेटी हुँदाको आचरण
म केटाकेटी छँदा पानीको कम प्रयोग हुन्थ्यो । पानी पौल थिएन, मेरो गाउँमा । पानी प्रशस्त नभएपछि पानीको मूल जोगाउनेतिर सम्पूर्ण ध्यान जानुपर्ने । तर ध्यान जाँदैनथ्यो । राणा शासनमा पनि पानीको स्रोत–मूल–संरक्षण गर्ने व्यवस्था बलियो थियो । पानीको मूल वरपरका रुख निजी भए पनि काट्न निषेध गरिएको थियो । पानी शुद्ध पार्ने प्रक्रिया, विधि र साधन प्रयोग गरिन्नथ्यो । खाने पानी र अरु पानी पनि छोपेर राख्न भनिन्नथ्यो । पानी तताउने कुरामा झारा तिर्नेजस्तो गरिन्थ्यो, व्यवहारमा ।
म सानो छँदा शौचालयको अवधारणा आएकै थिएन । मलमूत्र त्याग्ने ठाउँ भनेकै सार्वजनिक बाटो हुन्थ्यो, मुख्यत: बर्खामा । तराईतिर त साँझ पर्नलागेपछि टोल–टोलका महिला जम्मा भएर गाउँ नजिकैको बाटोमा लाइन लागेर निवृत्त हुने गर्थे । दृश्य यस्तोसम्म हुन्थ्यो, कुनै पुरुष त्यो बाटो आइरहेको भए अर्कै दिशातिर आँखा लगाएर ती महिला कहिले उठ्ने हुन् भनी प्रतीक्षा गर्नुपर्ने । बिफर र हैजाको महामारी आउँथ्यो । मान्छे स्वाहा हुन्थे । यद्यपि बिफर नआओस् भनी खोपाउने, शीतलाको पूजा गर्ने परम्परा पनि थियो । तर पनि केही वर्षमा महामारीका रूपमा आउँथे यी ।
अर्को त्यस्तै दादुरा रोग हुन्थ्यो भने तेस्रो छाला सम्बन्धी रोग ठेउला हुन्थ्यो । हामीलाई हाम्रा अभिभावकहरू यी तीनथरी रोगलाई सरुवा रोग भन्थे । बिरामीको नजिक नजान भन्थे । पिसाब गरेपछि हात धुन पनि नपर्ने तर दिसा गरेपछि भने हात पनि धुनुपथ्र्यो । साबुन दुर्लभ वस्तुमा पथ्र्यो । त्यसैले हामी माटो लगाएर हात धुन्थ्यौं । पानी फारो गर्नुपर्ने हँुदा माटो लगाएर हात धुने भनेको सफाइभन्दा पनि विधि पुर्‍याउने मात्र काम हुन्थ्यो । पिसाब गर्दा जनै कानमा बेर्न नपर्ने, तर दिसा गर्दा भने कानमा जनै नबेरी नहुने । पानीले कुल्ला गरेपछि मात्र जनै कानबाट झिक्न हुने आचरण बनेको थियो । रजस्वला भएका महिलालाई कथं छोइयो भने नुहाउनैपर्ने जतिबेला भए पनि र जनै फेर्नुपर्ने जाडो–गर्मी जस्तो ऋतु भए पनि ।
दाँत सिठुवाले माझिन्थ्यो
एउटा पँधेरो, २१ परिवार पानीले सधैं हाहाकार । हाम्रा बाले एउटा पँधेरो बनाउनुभो । त्यो पँधेरो कहिल्यै नसुकोस् भनी मलाई एउटा बोकोसहित फूलचोकी पठाउनुभो । साथी थिए, गाउँकै पाका दिलबहादुर विष्ट (पहले) । फूलचोकी वन निकै घना, हिंस्रक जनावर हुने । हामीले बलि दिन लगेको बोको कराइरहने । मलाई कता बोकाको आवाज सुनेर चितुवा, बाघजस्ता मांसाहारी जनावरले झम्टने त होइन ? भन्ने चिन्ता ।
फूलचोकीमा बोकोको बलि दियौं (काट्यौं) पँधेरोमा हाल्न कुण्डको जल पानी ल्यायौं, एउटा सानो सिसीमा । त्यो जल पँधेरोमा हाल्यौं । त्यो पँधेरोले २५/३० परिवारलाई झन्डै ४० वर्ष धान्यो । एउटा घरमा प्राय: दुई गाग्रा, एउटा गाग्री हुन्थे । म हुर्केको युगमा एउटा घरपरिवारले ३०/३५ लिटर पानी लग्थ्यो, पँधेराबाट । मेरो बा १ लिटर पानीले नुहाउनुहुन्थ्यो, घरमै । अचेल जस्तो बाक्लो रुमालले जीउ पुछ्ने चलन थिएन । एउटा पातलो मैलो कपडाले जीउ पुछेको जस्तो गर्नुहुन्थ्यो । हामी केटाकेटीका लागि रुमाल भनेकै आफूले लगाइरहेको दौराको फेर हो । मुख धुन्थ्यौं र दौराको फेरले पुछ्थ्यौं । दाँत माझ्ने बु्रस–मञ्जनको नाम पनि सुनेको थिएन । हाम्रो बा तमाखु, चुरोट, सुपारी खानुहुन्थ्यो । त्यतिबेला तमाखु खाने गरिन्थ्यो । त्यही तमाखुको सिठुवा, गोल र खरानीले पनि दाँत माझिन्थ्यो ।
मञ्जन खाएपछि खाएछन् भकुराइ
दाँत माझ्ने मञ्जनको कुरा गर्दा डा. नोबलकिशोर राईको कान्तिपुर दैनिकको आइतबारे कोपिला प्रकाशनमा ‘म सानो छँदा’ शीर्षकमा मैले पढेको थिएँ, केही वर्ष अघि । उनका दाजु भारततिर हो वा युरोपतिर गई फर्केका रहेछन् । दाँत बु्रस र मञ्जनले माझ्दा रहेछन् । दाजुले त्यसरी शानसँग दाँत माझेको देखेर नोबल र उनका भाइ निकै लोभिएछन् । पहाडको घर दाँत सफा गरिसकी बु्रस र मञ्जन पालीमा घुसारेर काममा गए लाहुरे दाजु ।
दुई भाइ मिलेर डोकोमा चडी मञ्जन र बु्रस झिकेर दाँत माझ्न थालेछन् । मञ्जन मुखमा हाल्दा स्वादिलो लागेछ । दाँत नमाझी दुई भाइले सबै मञ्जन खाएछन् । दाजु आएपछि त्यो थाहा पाएर दुवै भाइलाई ढुटो हुनेगरी भकुरेछन् । नेपाल सरकारको राजदूत हुने प्रोफेसर डाक्टरको समेत बाल्य जीवन कस्तो थियो, नेपालको । चन्द्रग्रहण लाग्दा पुस, माघको ठन्डीमा वागमतीमा ग्रहण स्पर्श, मध्य र अन्त्य हुँदा नुहाउनैपर्ने । त्यो बेहोरेको छु, मैले ।
दालभात खान बाहुनका छोराले व्रतबन्ध गरेपछि धोती लगाउनैपर्ने । अझ दहीच्युरा मुछेर खान पनि धोती लगाउनैपर्ने । नत्र दहीच्युरा मुछेर खान हुँदैनथ्यो । हामीले भोगेको र बेहोरेको त्यो समय र हाम्रा छोराछोरी, नातिनातिनी हुर्कंदाको यो समयमा व्यवहारमै आएका परिवर्तन देखेर अहिले अचम्म लाग्छ । कत्रो परिवर्तन ८/९ दशकमा ?
स्वाभिमान, स्वाधीनता, आत्मसम्मान र स्वामीभक्ति भारदारीपनको निर्वाह एउटै पात्रबाट हुन कति सम्भव होला ? प्रश्नवाचक छ ।
भाद्र २, २०७५ भैरव रिसाल
काठमाडौँ — सक्कली, खाँटी भारदारहरूको अनौठो स्वभाव हुँदोरहेछ । आफूले मालिक मानेकाहरूबाट जेजस्ता सजाय दिँदा वा शक्तिबाट हटाउँदा पनि सहेर बस्ने, मौन बस्ने धैर्य हुँदोरहेछ । यो सहिष्णुता, धैर्य र मौन संस्कार नवभारदार, भर्खर–भर्खर दरबार पसेका नवप्रवेशीहरूमा कोर्कालीपन, काँठेपन, उत्ताउलोपनको यदाकदा उत्तेजनासम्ममा पनि जाने स्वभाव हुँदोरहेछ ।
यस्तो स्वभावलाई स्वाधीनता, स्वाभिमान, आत्मसम्मानको परिभाषा अन्तर्गत पनि राख्न सकिन्छ होला । स्वाभिमान, स्वाधीनता, आत्मसम्मान र स्वामीभक्ति भारदारीपनको निर्वाह एउटै पात्रबाट हुन कति सम्भव होला ? प्रश्नवाचक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा एकै प्रकारको अवस्था पाइँदैन । सनातनी भारदारहरूमा मालिकबाट जेजस्तो कारबाही गरे पनि सहने, प्रतिवाद नगर्ने, आज अन्यायमा परे पनि भोलि नजर पर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा शान्तसँग बस्ने, कतै उजुर–बाजुर गर्ने त के किञ्चित असन्तुष्टिसमेत सार्वजनिक नगर्ने परम्परा थियो । पुरानो सामन्त समाजकै मनोविज्ञान हो यो । असल भोलिको सुन्दर परिकल्पनामा सहने प्रवृत्ति बलवान हुँदोरहेछ । मनोविज्ञानको परिभाषा, परिधि र ज्याख्या पनि बडो विचित्रको हुँदोरहेछ ।
निजामती सेवा र टंकप्रसाद
नेपालको सामन्तवादको चरित्रको यस्ता केही प्रसङ्ग उल्लेख गरौं । राष्ट्रको सार्वभौम शक्ति वा सत्ताका कार्यकारिणी शक्ति राणा मुख्तियार वा श्री ३ महाराजमा निहित हुँदाको १०४ वर्ष लामो कालखण्डमा प्रतिवर्ष पजनी हुने गथ्र्यो । श्री ३ महाराजलाई मन नपरेका जोसुकै हाकिमदेखि तलसम्मको दर्जाको मान्छे पजनीमा पदमुक्त गरिन्थ्यो । मनपरेकाहरू साविक पदमा थामिन्थे । बढी मनपरेका वा मालिक रिझाएकाहरूको पदोन्नति हुन्थ्यो । त्यस्ता मनोमानीको उजुर–बाजुर गर्ने, सुनुवाइ हुने प्रक्रिया नै थिएन, नत थियो, त्यस्तो निकाय नै । उजुर गर्ने मनोबल त के मानसिकता नै हुँदैनथ्यो । त्यतिबेलाको जागिर वा नोकरी भनेकै एक वर्षका लागि ।
हरेक फूलपातीमा पजनी हुने प्रचलन थियो । पजनी बाहेकमा खोसिए वा नियुक्त भए विशेष मानिन्थ्यो । श्री ३ को मुखमै हुकुम हुन्थ्यो । त्यस्तो हुकुमको विपक्षमा हुने सुनुवाइ आदिमा उजुर गर्ने प्रक्रिया थिएन, नत थियो, त्यस्तो निकाय नै । पुनरावलोकन, पुनर्नियुक्ति हुने परिपाटी त कताकता ? २०१२ माघ १३ गते टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि बल्ल निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा भयो र शासन प्रणालीको प्रारम्भिक प्रारम्भ भएको हो । जसको सम्पूर्ण श्रेय टङ्कप्रसाद आचार्यलाई जान्छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
दण्ड हराएको राजनीति
दह्रो दण्डनीति नभएको राजनीतिले चिताएको प्रतिफल दिँदोरहेनछ, खासगरी अल्पविकसित मुलुकहरूमा । त्यसो त विकसित मुलुकहरूको राजनीतिमा पनि दण्डहीन नीति नभएको हुँदैन । तर विकसित मुलुकहरूमा आममान्छे राजनीतितिर आकर्षित हुँदैनन् । ४, ५, ६ वर्षमा सम्बद्ध मुलुकको संविधान अनुसार एकपल्ट आवधिक निर्वाचन हुन्छ ।
आम मान्छे राजनीतिमा ब्युँझने भनेकै त्यही एकपल्ट हो । त्यो पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य पुँजीवादी, साम्राज्यवादी मुलुकहरूमा आम सर्वसाधारण मान्छेलाई पेटकै वरिपरि सीमित गर्ने नीति हुँदोरहेछ । तसर्थ आममान्छे राजनीतितिर आकर्षण होइन, विकर्षित हुनेरहेछन् । अनि स्थानीय तह निर्वाचनमा भने अलि बढी मान्छे चुनावमा ओर्लन्छन् । स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो अत्यन्त विकेन्द्रित एवं स्वायत्तता धेरै भएका मुलुकहरूको राजनीतिमा दण्डनीति अरू कडा हुन्छ । यस मामलामा राजा महेन्द्र बिछट्टै बाठा थिए मात्र होइन, चौपट्टै चतुर तथा अझ धूर्तसमेत थिए ।
राजा महेन्द्रले आफ्ना विश्वस्त एवं पुरै पत्यारमा रहेका राजप्रासाद सेवाका कैयौं माथिल्लो ओहदाका टाउकेहरूलाई बर्खास्त गर्ने गर्थे । त्यसरी दरबारको सेवाबाट फालिनेमा दयारामभक्त माथेमा, राजाका आफ्नै नजिकका नातेदार मोहनविक्रम शाह, लोकदर्शन बज्राचार्य, प्रमुख जनसम्पर्क अफिसर पूर्णप्रसाद उपाध्याय (पूर्णप्रसादको अफिस नै खारेज गरे) अनिरुद्धप्रसाद सिंह, समरराज कुँवर, चुत्रबहादुर थापा, सरदार विष्णुमणि आचार्य उल्लेख्य छन् । यी मुख्य हुन् । अरू पनि कति होलान् ।
प्रशासनका अनौठा कथा
राजा वीरेन्द्रको वंश नै सखाप हुनेगरी २०५८ जेठ १९ गते राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । तत्कालीन युवराजाधिराज दीपेन्द्र कोमामै राजा घोषित भए, तर त्यही कोमामै बिते । तत्पश्चात् ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह राजा भए । उनले पनि अलिपछि प्रमुख सैनिक सचिव विवेकविक्रम शाहलाई हटाए । यी सबै कुरा राजनीति र दण्डनीतिको आ–आफ्नो बेलाको, आ–आफ्नो चमत्कारको खेल वा प्रदर्शन हो ।
बर्खास्त हुनेमध्ये लोकदर्शन त कारागारमै जाकिए । भगवतीप्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीशबाट निकालिए । यी मध्ये कतिजनाले आफू अन्यायपूर्ण तरिकाले निकालिएँ भन्नेजस्ता कुरासम्म पनि गरेनन्, पुरै सहेर बसे । कतिले त निगाहपूर्वक निकालिएँ भनेर चाकडीसमेत गरे रे भन्ने सुनिन्थ्यो, त्यतिबेला । लोकदर्शनपछि टिपिएर लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी प्रमुख भए, राजाबाटै । अनिरुद्धप्रसाद सिंह अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्त भए, २०३४ देखि २०४२ सम्म । भगवतीप्रसाद सिंह जनमत संग्रह निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भए, २०३६ सालमा । नेपालको प्रशासनमा यस्ता–यस्ता कथा हुन्थे ।
समय–समयका कुरा  !
त्यसरी दरबारको सेवाबाट बर्खास्त गरिनेहरूमा पनि तह हुन्छ भन्छन्, दरबार बुझेकाहरू । कतिजना राजभक्त सेवक दरबारको सेवा पुनर्गठन गर्दा सेवाबाट हटाइने रहेछन् । हटाइहाल्ने मन छैन राजारानीको, तर परिस्थितिले नहटाई नहुने भो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी कारबाहीमा परेकालाई दरबारको ढोका बन्द हुँदोरहेनछ । दरबारमा निश्चित समयसम्म दिनदिनै जाने ढोका खुला हुँदोरहेछ ।
कसै–कसैको त अरू कुनै सम्मानित पदमा मनोनयन पनि हुँदोरहेछ । उदाहरणका लागि राजसभाको सदस्यमा । जुन सदस्यले सम्माननीयको सम्बोधन सम्मान पाउँथ्यो । कसैको कुनै पदमा नियुक्ति नै पनि । दृष्टान्तमा लोकदर्शन बज्राचार्य । सुरुमा दरबारको नोकरीबाट मात्र हटाइएनन्, जेलसमेत कोचिए । यसरी दरबारको कडा कोपभाजनमा परेका तर केही कालपश्चात् लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भए ।
जर्नेल चुत्रबहादुर थापा राजसभाका सम्माननीय सदस्यमा राखिए । यो स्वभाव थियो, नेपालको शाहकालीन दरबारको र भारदार संस्कृतिको ।